ချစ်သောကဗျာ -၈ (နိဂုံး) | PoemsCorner
သေတ္တာနက်ဟူသော အသုံးကိုကြားဘူးကြပါမည်။ တစ်ဖက်မှ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထည့်လိုက်၊အခြားတစ်ဖက်မှ ပစ္စည်းအသစ်ထွက်လာမည်။ အထဲမှာ ဘာဖြစ်နေသည်ကိုမသိ။ ရုပ်မြင်သံကြားကို ဥပမာပေးရမည်။ ကြိုးတွေ ၊ပလပ်တွေဆက်။ခလုပ်နှိပ်၊ ဇာတ်ကားကြည့်၍ရပြီ။ အထဲမှာ ဘာဖြစ်နေမှန်းသိစရာမလို။ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်သူအတွက်မလို။
ပြင်သူအတွက်တော့လိုမည်။ ထုတ်လုပ်သူအတွက်တော့လိုမည်။ သူတို.ကတော့ တိတိကျကျသိဖို.လိုသည်။
ကဗျာလည်းသေတ္တာနက်များဖြစ်လေမည်လား။ ခံစားသူတွေ၊စာဖတ်သမားတွေ အတွက် ကဗျာသာလိုပါသည်။ ကဗျာအကြောင်းမလိုပါ။ ကဗျာရေးသူ၊ ဝေဖန်သူ အတွက်တော့ လိုအပ်ပါမည်။ အခြေခံတော့လိုပါမည်။
မည်သူမဆို စု၊တု၊ပြု ကို မကျော်နိုင်ပါ။ သို.သော် တု အဆင့်မှ ပြု အဆင့်သို. မဆက်နိုင်ပဲ တစ်သက်လုံးနေသွားသူများရှိနေနိုင်ပါသည်။ ထို အခါ ကဗျာ နှင့်ဆိုင်သော အသိပညာများကို ပြန်လည်မေ့နိုင်အောင်ကျိုးစားရပါတော့မည်။ ကိုယ်ပိုင်လိုချင်လျှင် အရိပ်ကိုမေ.မှရပါမည်။ ကဗျာတွင် အသိပညာမလိုပါဟူသောစကားစကို ချမိ၍ ဆက်ရှင်းလာရသည်မှာ စာစုများ များလာပါသည်။ တော်သင့်ပြီဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမရပါသည်။ဤဆောင်းပါးစဉ်သည် ကဗျာရေးစ၊ရေးမည့် လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။
ပါရမီသက်ကုန်လျှင် ပညာသက်ဖြင့် ဆက်ရတယ်ဟူသော ခင်ဝမ်း၏ စကားကို မမေ့လျော့စေရန် ရေးပါသည်။
ဆရာကြီးလုပ်၍ ပြောခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဟု အထပ်ထပ်ဆိုပါသည်။ ဖတ်မိသမျှထဲမှသဘောတူရာ၊ တွေးမိရာကိုပြန်မျှခြင်းဟုလည်းဆိုပါမည်။ လွတ်လပ်စာကွဲလွဲခွင့်ကိုလည်းယုံပါသည်။ ကွဲလွဲကြပါစေ။
အချစ်ကြောင့် ကဗျာရေးသူများလည်းရှိပါမည်။ အရှိန်ကုန်လျှင်ရပ်ပါမည်။ သူတို.ကဗျာသည် တန်.သွားပါမည်။ သို.မဟုတ် ကဗျာအရှိန်မသေလျှင် ဘ၀ကဗျာ (လူသာမန်အပြောဖြင့် နာမည်တပ်ပါသည်) ဘက်ကို ကူးပါမည်။ အချိန်ကပေးသော ဝေဒနာ (အချစ်ကဗျာ)ကို ယူကြပါစေ။ကန်.ကွက်ရန်မရှိပါ။
၀ဏ္ဏပဘာမှ သွေးငင်ကြမ္မာကြောင့်စသော ၀ါသနာသည် ပါရမီတော်ခန်းပျို.အထိမတက်ဟု မည်သူမှမပြောနိုင်ပါ။ မိုးကောင်းက်င မိုးရေလေးတစ်စက်ဖြစ်သော မိုးမျိုးစေ့လေးသည် မိုးလုံးပတ်လည် ရွာလာနိုင်ပါသည်။ သစ်စေ့လေးမှစသော အပင်သည် သစ်တောကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ကဗျာရေးသူများအတွက် ကုန်ကြမ်းရရန်နှစ်နေရာရှိပါသည်. တစ်ခုကတော့ မျက်စိနှင့် နားတို.၏ အားကြီးသောလောကဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောလျှင် ခေတ်ပြိုင်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်၏ ရိုက်ခတ်ချက်မပါပဲကဗျာရေး၍ မဖြစ်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ အတိတ်ကာလမှ အောင်မြင်မှုဆည်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ အတိတ်သမိုင်းမှ ကဗျာများစာများကို သမိုင်းပစ္စည်းအဖြစ် ဖုံတက်ခံထားလျှင် ကို. အတွက် ပညာသက်ကို ကိုယ်ဖျက်သည်နှင့်တူနေပါမည်။ အနုပညာပစ္စည်းသည် အချိန်ကာလနှင့် နေရာဒေသကိုလွန်ပါသည်။
မင်းသုဝဏ်ကြောင်းပြောမိ၍ နှာခေါင်းရှံ.ပြသော ကဗျာဆရာပေါက်စလေးတစ်ဦး(လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များက)တွေ.ဖူးပါသည်။ မဂ္ဂဇင်းများတွင်ပါနေပါပြီ။လက်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ခေတ်ပြိုင်ခံစားမှု အာရုံမြင့်ပါသည်။ ယနေ. မတွေ.မိတော့ပါ။
နောက်ဆုံးပြောစရာတစ်ခုရှိပါမည်။ သေတ္တာနက်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် ကုန်ကြမ်းသာမက ကိရိယာလည်းလိုပါသည်။ မည်သည့်ကိရိယာကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ စားသုံးသူကို ကြည့်ရပါသည်။ ကဗျာဆိုတာ လူအကြိုက်လိုက်ရေးတာ မဟုတ်ဘူးကွဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဆိုခွင့်ရှိပါသည်။ အစွန်းမရောက်စေရန်တော့ လိုပါသည်။ ကိုယ့်ဘာသာရေးပြီးသိမ်းထားသော ကဗျာဆရာများရှိပါလိမ့်မည်။ ကဗျာဆရာအဖြစ်မှမလျော့ပါ။
သူငယ်ချင်းကိုပြသည်ဖြစ်စေ၊ တခြားသူကိုပြသည်ဖြစ်စေ၊အွန်လိုင်းမှာ တင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်သည်ဖြစ်စေ တခုခုလုပ်သည်ရှိသော် အဝေဖန်တော့ခံနိုင်ရပါမည်။ မိမိကဗျာ ကို အဆင့်မြှင့်ထားလိုသော သဘောသည် မော်ဒန် လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည်ဟု ဆရာ ဇော်ဇော်အောင်ပြောခဲ့ဘူးပါသည်။ မတားမြစ်လိုပါ။
ပြောလိုရင်းကို မလွဲစေချင်ပါ။ကြိုက်သည့် ကဗျာ နိဿယကိုသုံးပါ။ အဆင့်မြင့်မမြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကိုယ့်တွင်မရှိတော့ပါ။ စာဖတ်သူ၊စာဖတ်နာသော ပရိသတ်များ အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ ငါ့ကဗျာကို လူမကြိုက်တာ ငါကမြင့်နေလို.ပဲဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလွဲပါပြီ။
မည်သည့် ကဗျာအမျိုးအစားမဆို သဘောပေါက်ခံစားနိုင်သော ပရိသတ်များရှိနေပါကြောင်း ပညာရှိသတိထားတော်မူစေကြရန် တင်ပြပါသည်ခင်ဗျား။ ။
(ဝေဖန် အကြံပေးနိုင်ပါသည်၊ [email protected] )
In: ဆောင်းပါး Posted By: မော်နီ Date: Jun 1, 2011